Akekho ongabaza izinzuzo zika anyanisi empilweni yomzimba. Phela, u-anyanisi ucebile kulezi zakhi eziwusizo ezifana ne-iron, calcium, i-zinc, namavithamini weqembu B, C, E. Kungenzeka ukuthi abanye bakholelwa ukuthi u-anyanisi asetshenziselwa kakhulu kwi-cosmetology, ikakhulukazi njengomkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele. Ama-vitamin masks ngezinwele ezivela emnseni azosondela kunoma yiluphi uhlobo lwezinwele. Ama-masks anjalo anciphisa futhi anondle izinwele, okubaluleke nakakhulu izinwele ezibuthakathaka.
Ukuphulukiswa kwe-anyanisi ngezinwele
Ama-masks we-anyanisi akhipha izinhlanzi, avimbele ukulahlekelwa izinwele ngaphambi kwesikhathi, ukuthuthukisa isakhiwo nokukhula kwazo. Ngaphezu kwalokho, ngokusetshenziswa kwama-anyanisi okuvamile, izinwele ziba lukhuni futhi zikhanya. I-silika equkethe u-anyanisi iqinisa izinwele zezinwele, ithuthukise umsoco wayo nesimo. I-Zinc inomphumela wokuvuselela futhi iduduza isikhumba.
Ungayisebenzisa kanjani anyanisi njengesisekelo samaski ezinwele? Cabangela ezinye izindlela zokupheka, ezingalungiselelwa kalula ekhaya.
Masks for izinwele kusuka anyanisi: zokupheka
Indlela elula yokwenza imaski e-anyanisi yezinwele ukuthola ijusi elihlanzekile kuyo. Ngenxa yalokhu, i-anyanisi idinga uketshelwa futhi ifakwe ijusi kusuka kuso. Cishe amathisipuni amathathu wejisi anyanisi kufanele agxilwe zibe izimpande futhi ashiye ingxenye eyodwa nengxenye amahora amabili. Ngesikhathi sale nqubo, ikhanda liyanconywa ukugoqa ngekhanda elikhethekile noma ifilimu ye-polyethylene. Hlanganisa nge shampoo.
Le mask e-anyanisi ilungele ukugcinwa kwethembo jikelele kanye nezinhloso zokuvimbela. Faka isicelo semaski kanye ngesonto izinyanga ezimbili.
Isisindo se-anyanisi esondayo
Njengokwenza iresiphi yangaphambilini, kuyadingeka ukhiphe ijusi anyanisi. I-isipuni esisodwa senyosi yemvelo kanye nesilinganiso esifanayo se-yogurt ne-burdock zixubene nama-tablespoons amabili wejusi anyanisi olusha. Le nhlanganisela ixutshwe ngokuphelele futhi isetshenziselwa ukuxubha zibe izimpande zezinwele. Inani elisele le nhlanganisela kufanele lihanjiswe ngokulinganayo phakathi nobude bezinwele bese ugoqa ikhanda lakho kwifilimu ye-polyethylene. I-mask ihlanzwa ngehora besebenzisa i-shampoo.
Ngomaski onjalo, isipuni esisodwa sejisi anyanisi kufanele sixubane ne-isikhupha samaqanda. Khona-ke isipuni esisodwa samafutha we-castor noma i-burdock amafutha sinezela engxenyeni ephumela. Emva kwalokho, amaconsi amathathu amafutha abalulekile we-ylang-ylang noma i-lemon namaconsi amahlanu we-solution yamafutha amavithamini athululelwa emasikini. Ngemuva kokugubha imaski ezimpandeni zezinwele, kufanele igcinwe cishe isigamu sehora. Uma kunjalo, uma kukhona ukushisa okukhulu, i-mask idinga ukuhlanzwa ngokushesha.
I-anyanisi imaski yokuvuselela izinwele
Ukuze ulungise le mask, hlanganisa u-anyanisi, isanqante nejusi likalamula (ngezipuni ezimbili) ngokulingana okulinganayo. Bese ufaka isipuni samafutha we-burdock nemvubelo eyomile ehlanjululwe emanzini afudumele (i-spoonful yemvubelo ibe yizipuni ezimbili zamanzi) engxenyeni elandelayo. I-vitamin mask ibuye igxilwe zibe izimpande futhi ihlanganiswe nenhloko ye-polyethylene. Kufanele ihlanzwe ngehora.
I-masikisi e-anyanisi evimbela ukulahleka kwezinwele
Omunye u-anyanisi omncane kufanele uchotshozwe, uhlanganiswe nama-punikidi amabili e-burdock amafutha, bese ubuningi obumphumela kufanele buhlwithwe zibe yizimpande zezinwele. Njengoba uswele ukushaywa kwezinwele, umasikisi kufanele usetshenziswe okungenani izikhathi ezintathu ngesonto, ngokushesha ngaphambi kokugeza ikhanda. Kunconywa ukuqhuba okungenani izinqubo ezingamashumi amathathu. Ungakhohlwa ukuthi izinqubo ezihleliwe kuphela ezizoletha umphumela oyifunayo kusukela ekusetshenzisweni kwamaski ezinwele we-anyanisi.
Ukusetshenziswa njalo kwamaski kusuka anyanisi (kanye nezinsuku ezimbili okungenani inyanga) kuzonikeza izinwele zakho ubuhle nempilo. Ukuvimbela amasiki anjalo kungasetshenziswa kanye noma kabili ngesonto.
Ngokuvamile kunezimo lapho isizathu sokunqatshelwa kwamaski o-anyanisi yiphunga lawo elilodwa, elihlala ngemuva kokusebenzisa ikhambi. Kodwa kufanele kuqaphele ukuthi lokhu kuyindaba eyodwa. Iphunga elimnandi, ngokuyisisekelo, lingalokhu lihlala ezinweleni ezimanzi nezonakalisiwe. Ukuze ususe iphunga le-anyanisi, ungagcoba ikhanda lakho ngesisombululo se-apula cider uviniga, emva kwalokho kufanele uphinde usebenzise i-shampoo. I-Apple cider uviniga ingathathwa indawo ngokufaka amathisipuni amancane elamula kalamula.
Izinyathelo eziyishumi Izinwele Ezinempilo Nezingubo Ezinhle
Ungasusa kanjani umbala oboya obomvu?
Amasks for izinwele kusuka isinkwa
Indlela yokunakekela ihlobo ngezinwele ezinde?
Izitayela zezinwele ezingavamile
I-mask yama-Indian mask: izindawo kanye zokupheka
Umbala we-pink ngaphakathi kwekamelo lokulala
Ukubhoboza ulimi: kuwufanelekile
Ingaphakathi Lonyaka Omusha-2017: izimfihlo zokuhlobisa izitayela
USergey Bezrukov nomkakhe okhulelwe bavele eKinotavr 2016, isithombe
Isaladi kusuka kumazambane kanye ne-beet
Isobho esiphundu nge-chickpeas
I-pearl ibhali ku microwave